Ithegi: ubungqina babathengi | Martech Zone
Ithegi: ubungqina babathengi
Uyisebenzisa kanjani iVidiyo ukuThengisa kwiShishini lakho elincinci lokuThengisa izindlu
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 17, 2021 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 17, 2021 UTom Siani
Ngaba uyazi ukubaluleka kwentengiso yevidiyo kubukho bakho kwishishini lokuthengiswa kwezindlu? Nokuba ungumthengi okanye umthengisi, ufuna i-brand ethembekileyo neyaziwayo yokutsala abathengi. Ngenxa yoko, ukhuphiswano kwintengiso yezindlu luyoyikeka kangangokuba awunakukunyusa ngokulula ishishini lakho elincinci. Ngethamsanqa, ukuthengisa kwidijithali kubonelele ngamashishini abo bonke ubungakanani kunye nezinto ezininzi eziluncedo ukwandisa ulwazi lwabo lwentengiso. Ukuthengisa ividiyo
Sebenzisa iiQhinga lokuThengisa uMxholo kwii-imeyile ze-B2B
Kukho amaxesha apho abathengisi bayilandela ngokusondeleyo indibano kwaye ndicinga ukuba licebo elihle. Umzekelo, ukuba noncedo okanye ikhonkco lomxholo ngasekunene kwesiza sakho, ngokulandelayo okanye ngenise amaqhosha asezantsi ekunene, kunye neendawo zokugxila ukulungiselela iindawo zokujonga ezahlukeneyo. Ngamanye amaxesha, ayenzi ngqiqweni kwaye ndiyakholelwa ukuba le infographic ibonelela ngomzekelo obalaseleyo. Ishishini ukuya kwiShishini (i-B2B) ii-imeyile zihlala zisisihloko esinye, iphulo elinye lokubiza isenzo.